Dokotera nandresy ny fampidinana fampiharana ho an'ny Android [Update 2022] | APKOLL
Ianao ve mitady fiarovana tsara indrindra amin'ny toe-javatra areti-mifindra? Raha eny dia eo amin'ny toerana mety ianao. Entina anao ny fampiharana tsara indrindra, izay fantatra amin'ny hoe Doctor Wins App. Io no rindranasa Android farany indrindra, izay manolotra tolotra fiarovana tsara indrindra ho an'ny olona mba hivezivezena sy hilamina. Raiso ity app ity amin'ny Smartphone na tablette-nao mba hidiranao amin'ireo endri-javatra.
Ny taona lasa dia iray amin'ireo taona sarotra indrindra ho an'ny rehetra manerana izao tontolo izao. Nisy fihanaky ny areti-mifindra tany Shina, izay nifehy nandritra ny fotoana kelikely. Saingy satria nisy olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao tany Shina, izay niverina tany amin'ny fireneny, dia tsy ela dia nisy fiantraikany teo amin'ny ankamaroan'ny firenena ilay viriosy.
Tao anatin'ny fotoana fohy dia niatrika ny iray amin'ireo toe-javatra mampidi-doza indrindra izao tontolo izao. Matahotra ny olon-tiany ny rehetra ary iharan'ny fanerena ny governemanta. Ny fanakatonan'ny governemanta ny dingana sy ny asa rehetra, ao anatin'ny fotoana fohy dia nasaina ao an-tranony ny olona ary aza miala.
Vetivety dia voafehy ny aretina, fa misy ihany koa ny loza mety hitranga ary mety ho voan'ny virus ny olona. Noho izany dia eto izahay miaraka amin'ity rindranasa mahavariana ity ho anao rehetra. Azonao atao ny miaro ny tenanao sy ny fianakavianao amin'ity rindranasa ity. Alao ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ity fampiharana ity amin'ny antsipiriany etsy ambany.
Topimaso momba ny Doctor Wins App
Fampiharana fitsaboana Android izy io, izay manolotra serivisy fananana Covid-19 tsara indrindra ho an'ny mpampiasa. Izy io dia novolavolaina mba hitarihana ny olona amin'ny toerana azo antoka ary hanome toro-hevitra momba ny fiarovana amin'ny aretina. Io no fomba tsara indrindra hampihenana ny fihanaky ny valanaretina sy hanohanana ny vahoaka. Manolotra serivisy sy endri-javatra maimaim-poana ho an'ny mpampiasa hankafiziny ny fiainany azo antoka.
Ny governemanta samihafa dia manome ny olony hanana serivisy nomerika samihafa hifehezana ny valanaretina. Noho izany, ny governemanta Thailand dia nanolotra an'ity fangatahana ity ho an'ny mpiray tanindrazana aminy. Doctor Wins Apk dia manome serivisy marobe ho an'ireo mpampiasa hahazo fanampiana amin'ny toro-hevitra momba ny dia sy ny fahasalamana.
Misy fanontaniana samihafa ho an'ny mpampiasa, izay misy ifandraisany amin'ny fanjakana ara-pahasalamana. Ny olona dia tsy maintsy manome ny fampahalalana mifandraika rehetra amin'ny fahasalamana, izay manome fampahalalana momba ny loza mety hitranga amin'ny aretina.
Ny fizotrany dia nomerika, izay midika fa ahiana be ny fampahalalana diso. Noho izany, ny mpampiasa dia tokony hiankina amin'ilay fampiharana mihitsy, fa azonao atao ny mampiasa azy io ho fisorohana. Ny endrika hafa an'ny Morchana Doctor Wins dia mandeha amin'ny toerana ampahibemaso.
Misy mpamaky barcode isan-karazany apetraka eny amin'ny toerana ho an'ny daholobe, izay manome fampahalalana momba ny fiarovana. Ny olona dia tsy maintsy mampiasa MorChana App naorina-in Bar-code reader mba hanangonana vaovao momba ny loza mety hitranga amin'ny toerana, alohan'ny hitsidika azy.
Miaraka amin'ireo karazana endri-javatra sy serivisy ireo dia afaka manana fomba fiainana milamina sy azo antoka ny olona. Afaka mandeha any amin'ny toerana azo antoka miaraka amin'ny fianakavianao ianao ary manohy ny hetsika ataonao isan'andro. Zahao ireo fiasa sy serivisy misy. Makà Doctor Wins For Android fitaovana ary manomboka ampiasao ity app ity.
anarana Mandresy ny dokotera
Anaran'ny fonosana com.thaialert.app
Developer Sampan-draharaha momba ny fampandrosoana ny governemanta nomerika, ThailandTools
Fanampiana ara-pahasalamana nomerika tsara indrindra
Makà valim-pahasalamana haingana sy marina
Fitsangatsanganana an-tongotra sy fivoriana
Mpamaky kaody bara vita anaty
Torohevitra sy fika momba ny fahasalamana
Fanontaniana marobe mifandraika amin'ny fahasalamana
Tsy manohana dokam-barotra avy amin'ny antoko fahatelo
Fampiharana mitovy amin'izany bebe kokoa ho anao.
Ahoana ny fampidinana ny MorChana Apk?
Azo alaina ao amin'ny Google Play Store izy io, saingy tsy mila mandany fotoana amin'ny fitsidihana sehatra maro ianao. Izahay dia hizara rohy miasa azo antoka sy miasa amin'ity rindranasa ity aminareo rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao eto amin'ity pejy ity ary paompy eo amboniny, ny segondra dia hanomboka afaka segondra vitsy.
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia mila manova ny toe-javatra ianao mba hanaovana fametrahana tonga lafatra. Mandehana any amin'ny Settings ary sokafy ny Panel Security, avy eo Checkmark amin'ny 'Source tsy fantatra'. Raha vantany vao vita io dingana io, dia azonao atao ny mametraka an'io fampiharana io amin'ny fitaovana Android anao.
Doctor Wins App no ​​fampiharana tsara indrindra ho an'ny mponin'i Thailand mba hahazoana fomba fiaina azo antoka sy azo antoka amin'ity toe-javatra misy ny areti-mifindra ity. Ny fampiasana ireo tolotra ireo dia manamora ny fiainanao amin'ny fahasahiranana ary mahazo fanampiana ara-pahasalamana maimaim-poana ihany koa.
Sokajy Apps, Tools Tags Dokotera Wins Apk, Doka no mahazo ny App, Doka Mandresy Fa Android, MorChana Apk Post Fikarohana
Ampidino ny Girl Alone Mod Apk ho an'ny Android [2022 Update]